Tabata အချိန်မှတ်နာရီ Pro ကို | Tabata နှင့် HIIT Timer | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » Pro ကို Tabata အချိန်မှတ်နာရီ - Tabata Timer နှင့် HIIT Timer
Pro ကို Tabata အချိန်မှတ်နာရီ - Tabata Timer နှင့် HIIT Timer APK ကို
Tabata အချိန်မှတ်နာရီ Pro ကိုသင့်ရဲ့ကြားကာလလေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် '' အားလုံး '' အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်သောအန္တိမ Tabata Interval သည် Timer ဖြစ်ပါတယ်။ Tabata နှင့်အတူသုံးပါ, HIIT, kettlebell, bodyweight လေ့ကျင့်ခန်း, ကြားကာလပြေး, Sprint, etc.Tabata အချိန်မှတ်နာရီ Pro ကိုပု Tabata လေ့ကျင့်ရေးနည်းလမ်းအတိုင်းလိုက်နာသူကိုလူတို့အဘို့ကြားကာလ timer နေရာမှာထုပ်ပိုးနေတဲ့ (Android ဖုန်းနှင့် Android tablet များနှစ်ဦးစလုံး) တစ်လောကလုံး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအရာ Tabata app အားသင်၏လေ့ကျင့်ခန်း, အရာကြွင်းလေ cooldown နှင့်အခြားကြားကာလကို automation ဖြစ်ပါတယ်ဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ဒီအသံကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါကသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ သင်အများကြီးပိုကောင်းအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည်, အဆက်မပြတ်ရေတွက်ခြင်းနှင့်ရိုးရိုးသားသားတပြင်လုံးကိုလေ့ကျင့်ခန်းပဲပိုပြီးမြန်ဆန်ခြင်းဖြင့်သွားရန်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ Tabata, HIIT, kettlebell, bodyweight လေ့ကျင့်ခန်း, ကြားကာလပြေး, Sprint နှင့်အခြားလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူကကြိုးစားပါ။
စိတ်ကို Tabata အချိန်မှတ်နာရီ Pro မှာအရင်ကဆိုရင်နှင့်အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများသည်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီးသင်တို့အဘို့ကို set up အခြေခံ Tabata နှင့်အတူသုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ပါရှိပါတယ်။ သင်ပိုမိုအတွေ့အကြုံကိုရရှိအဖြစ်သင်သည်သင်၏အရှိန်အဟုန်ကိုက်ညီဖို့အားလုံးကိုကြားကာလစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင်ပင်လျင်မြန်စွာကွဲပြားခြားနားလေ့ကျင့်ခန်းမှပြောင်းလဲပစ်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကြားကာလရလာဒ်ကဒိဖန်တီးသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
Tabata အချိန်မှတ်နာရီ Pro ကိုသင်၌ရှိကြ၏တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းအဘယ်အစိတ်အပိုင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ကူညီ Beep တင်ဆောင်သည်ကြားကာလသစ်တစ်ခုကြားကာလစတင်ခဲ့သည်သောအခါအသင်ပြောပြဥပမာ beeps ။ Tabata အချိန်မှတ်နာရီ Pro ကိုလည်းထပ်မံသင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းကိုအာရုံစိုက်ကူညီဖို့ကြားကာလကိုကြေညာကြောင်းစကားသံကိုထောက်ခံမှုရှိပါတယ်။ အိုးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပလီကေးရှင်းဂီတမပါဘဲပါလိမ့်မယ်, အဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းအားဖြင့်သင်တို့၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများနှင့်ပေါက်ကွဲမှုကိုရွေးပါ။
အဆိုပါ Google ကြံ့ခိုင်မှု app ကိုထောက်ခံနေသည်နှင့် Tabata app ကိုသင့်ရဲ့ Tabata ယလေ့ကျင့်ခန်းအကြိမ်ရေးလိုက်မည်, ကယ်လိုရီတစ်ခုချင်းစီကိုယလေ့ကျင့်ခန်းအပြီး (ကရင်ဘတ်သိုင်းကြိုးနှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာနှင့် Pro ကိုဝယ်ယူလိုအပ်ပါတယ်) ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်နှလုံးနှုန်းထားများမီးရှို့ကြ၏။
ဝေးနေဖြင့်သင့်ရဲ့ Android device များအတွက်ရရှိနိုင် Tabata လေ့ကျင့်ရေးအတှကျအကောငျးဆုံး app ကို Tabata အချိန်မှတ်နာရီ Pro ကိုလည်းပါဝင်သည်:
Pro ကိုတန်း Tabata timer နေရာမှာ + ။
box ကိုထဲကသုံးစွဲဖို့ + အသင့်ဖြစ်ပြီလား။ ဂန္ထဝင် Tabata ပြီးသားသင်တို့အဘို့ကို set up ။
+ သည်ကို Android ဖုန်းများနှင့် tablet များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။
+2လှပသော themes များနှင့်အတူလာ။
+ အရောင်အဝေးကမြင်နိုင် display ကို coded ။ အရောင်များကိုသင်တစ်ဦးကြားကာလများတွင်အသုံးပြုနေသည်စွမ်းအင်ပမာဏကိုကိုယ်စားပြုသည်။
+ ကနဦးနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲနှင့် warmup အချိန်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
+ လေ့ကျင့်ခန်း, အရာကြွင်းလေပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် cooldown ကြားကာလစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
+ သင့်ရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုက်ညီအစုံနှင့်သံသရာ၏နံပါတ် Adjust ။
လိုအပ်အဖြစ် + ဟာလေ့ကျင့်ခန်း၏အလယ်၌ကြားကာလအကြားဤနေရာသို့သွားရန်။
+ သည်သင်၏မျိုးစုံကြားကာလလေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များ (Pro ကိုဝယ်ယူလိုအပ်) ကူညီပံ့ပိုးရန်ရလာဒ်ကဒိ Build ။
လိုအပ်လျှင် + သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း Pause ။
+ Interval သည်တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းကြားကာလများအတွက် beeps ။ ကငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်အချိန်မယ့်အခါ, အဘယ်သူမျှမပြဿနာအထိမ်းအမှတ်သီးခြား Beep လိုအပ်ပါတယ်။
+ Interval သည်တုန်ခါမှု။
အဆက်မပြတ် Beep + ။
+ သုံးခုဒုတိယ Beep ။
+ တစ်ဝက် beeps ။
သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်မ screen ပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင် + Voice ကိုကူညီ။
+ Beep နှင့်စကားသံကိုရှင်းလင်းစွာကူညီရန်စကားကိုနားထောငျဖို့ခဏရပ်ရန်ဂီတသတ်မှတ်မည်။
+ Google ကြံ့ခိုင်မှုထောက်ခံမှု
ဒါဟာရဲ့လူတန်းစားအတွက်အကောင်းဆုံး app ကို IS, ရုံပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှာကြည့်ရှိသည်။
ထရေဇာ Farrugia အားဖြင့်အကောင်းဆုံး Tabata App ကို
"ဒီ app ကိုစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ကြီးစွာသောယလေ့ကျင့်ခန်းရဖို့ setting များကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖြစ်ခြင်း "ဟုအဆိုပါတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်
ဂရိတ်! ဧလိရှဗ Berry ဟာအားဖြင့်
"အနည်းငယ် tabata apps များကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်သည်! အကြံပြု! "
wow တိုနီ Cantu အားဖြင့်
"Little ကအချိန်ကြီးတွေ Hurt!"
Excelente Rafa Borja ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး entrenador
"Muy Facility က de programar los tiempos de las rutinas, y က muy buena Las frases က de motivacion diarias ။ "
သငျသညျလုံးဝအပြုသဘောကခစျြလိမျ့မညျ, တစ်ဦးပါ Pro Tabata အချိန်မှတ်နာရီပေးပါ။
ကြောက်မက်ဘွယ်လေ့ကျင့်ခန်းရှိသည်, Stay HIIT ။
ဗားရှင်း 1.7.2 အားလုံးကိစ္စရပ်များကိုအသုံးပြုသူများဖမ်းအကြောင်းကြားစာအပါအဝင်ဒီနှင့်အတူရှိခဲ့ကြသည်နောက်ခံနှင့်ပြုပြင်မှုများအတွက်အလုပ်လုပ်အပါအဝင်အန်းဒရွိုက်၏ခေတ်သစ်ဗားရှင်းများအတွက်နောက်ထပ် app ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဒါဟာနောက်ထပ်, Device ရဲ့အရေအတွက် app ကို layout ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရှည်ရပ်တည်မှု Beep ရွေးချယ်ရေး bug ကိုဖြေရှင်းနိုင်နှင့်လည်းအသံဖြင့်ထပ်မံကူညီပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
အမြဲအဖြစ်ကျနော်တို့ဒါကြောင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုအရာများနှင့်မနှစ်သက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဂရုစိုက်။ ကျနော်တို့ support@parabolicriver.com ပေါ်မှာဆိုရင်
Pro ကို Tabata အချိန်မှတ်နာရီ - Tabata Timer နှင့် HIIT Timer
12.03 ကို MB